Napoli Oo Ciyaar Adeg Dhexmartay Juventus Ku Hanatay Koobka Super Cupka Talyaaniga, Xili Ay Kooxda Benitez Rekoodhayaal Tiro Badan Ku Guulaysatay | Baarcadeeye
Napoli Oo Ciyaar Adeg Dhexmartay Juventus Ku Hanatay Koobka Super Cupka Talyaaniga, Xili Ay Kooxda Benitez Rekoodhayaal Tiro Badan Ku Guulaysatay
December 23, 2014 - Written by admin
Baarcadeeye,SPORTS-Kooxda Napoli ayaa ciyaar laysku dhamaaday kooxda Juventus kaga qaaday koobka Super Cupka Talyaaniga, waqtiga rasmiga ah ee ciyaarta ayaa ku soo dhamaaday barbaro 2:2 ah. Tevez iyo Higuain ayaa min laba gool kooxa hooda u kala dhaliyay. Ugu danbayn ayay kooxda Napoli ku guulaysatay rekoodhayaal. Goolahayaha Napoli ee Rafael ayaana noqday halyayga kooxdiisa Napoli u horseeday inay qaado koobkan Super Cupka kadib markii uu rekoodhihii ugu danbeeyay ka badbaadiyay Simone Podoin.
Kooxaha Juventus iyo Napoli ayaa markii saddexaad ku kulmay finalka Super Cupka talyaaniga, waxayna kooxda Allegri ayaa ku fikiraysay hanashada koobka xili ciyaareedkan ugu horeeya ee ay ku guulaysan karto kooxda Talyaani ah.Juventus ayaa sidoo kale doonaysay inay rekoodh cusub ku dhigto hanashada koobkan, waxayna doonaysay inay ku guulaysato koobkeedii Super Cupka Italy ee todobaad.
Kulankan ayaa ka dhacay magaalada doha ee dalka Qatar gaar ahaan garoonka Jassim Bin Hamad Stadium. koobkan ayay ahayd in la ciyaaro 24 kii bishii August ee horyaantii xili ciyaareedkan laakiin Napoli oo ku jirtay isreeb reebka Champions Leaquega ayaa dib loogu dhigay.
Kulankan oo ahaa mid aad iyo aad u xamaasad badan isla markaana ay jamaahiirta labada kooxood soo buux dhaafiyeen garoonka ayaa xiiso gaar ah u sii yeelay kulankan finalka Super Cupka Talyaaniga. waxaana si wayn dadka daawanayay uga dhex muuqaday dadka carabta ah ee fursada u helay inay wadankooda ku daawadaan finalka Super Cupka Italy.
Juventus ayaa qaab ciyaareed fiican ciyaarta ku bilaabatay, waxayna goolkeeda furitaanka la timid daqiiqadii 5 aad ee bilawgii ciyaartaba, waxaana goolkaas u dhaliyay xidigeeda Carlos Tevez, isaga oo ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Juventus hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Inkasta oo ay dadaal badan samaysay kooxda Napoli isla markaana ay halis galisay kooxda Juventus ayay haddana ku guuldaraysaytay inay wax gool ah la timaado qaybtii hore ee ciyaarta. Napoli ayaa abuurtay fursado badan oo ay goolal ku dhalin kari lahayd, waxayna xataa birta u garaaxday kooxda Juventus. qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 1:0 ay Juventus ciyaarta ku hogaaminaysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay Napoli soo laabtay iyada oo dardar xoogleh ku socota isla markaana ay ka go’antahay inay iska soo celiso goolka ay qaybtii hore ee ciyaarta Juventus kaga hormartay, waxayna fursado iyo dadaal joogto ah kadib daqiiqadii 68 aad la timid goolkeeda barbaraha, waxaana gool qurux badan oo madax ah u dhaliyay xidigeeda Gonzalo Higuaín .
Kubbad uu si cajiib ah uga soo shaqeeyay xidiga De Guzman isla markaana uu u soo karoosay Higuain oo goolka Juventus ku sii horsugayay ayay Napoli kula timid goolka ay dadaalka badan u soo gashay.Ciyaarta ayaana noqotay barbaro 1:1 ah.
Inkasta oo ay Juventus dadaal badan u gashay inay la timaado goolka guusha ayuu haddana waqtiga rasmiga ah ee ciyaartu ku soo dhamaaday barbaro min hal gool ah. Juventus ayaana dhawr jeer ku sigatay inay la timaado goolka guusha kadib markii ay dhamaadkii ciyaarta ay weerar isdaba joog ah ku soo qaadaysay goolka Napoli. waxaana sida uu dhigayo sharciga finalku ciyaarta lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah.
Markii layskugu soo laabtay waqtiga dheeriga ah ayay Juventus soo labatay iyada oo ku socota dardar xoogleh waxayna 15 kii daqiiqo ee hore ee waqtiga dheeriga ah ahayd kooxda gacanta sare leh. Juventus ayaa iska qasaarisay fursado goolal loo fishay.
Laakiin markii ay 15 ka kale ee waqtiga dheeriga ahi bilaameen ayuu markale Carlos Tevez kooxdiisa udhaliyay goolka labaad, ee xaalka ku sii adkeeyay Napoli, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:1 ay markale Juventus hogaanka ciyaarta ugu qabatay. Tevez ayaa kubbad uu ka darbeeyay cidhifka xerada ganaaxa Napoli ayaa goolka ka dhaliyay halka ay birtu dhulka kaga taal, goolhaye Rafael ayaana daawanayay kubbada oo goolkiisa sii galaysa.
Iyada oo ay ciyaartu dhamaanayso isla markaana aya u muuqatay inay Juventus koobka dhagaha qabsan doonto ayuu markaliya xaalku isbadalay, waxayna ciyaarta gashay xaalad waali ah, kadib markii uu markale Gonzalo Higuaín u jawaabay Tevez oo uu kooxdiisa Napoli u dhaliyay goolka barbaraha, isaga oo markale ciyaarta ka dhigay barbaro 2:2 ah. Goolka Higuaín ayaana ciyaarta qasab kaga dhigay in rekoodhayaal lagu kala saaro labada kooxood.
Ciyaartan oo ahayd mid layaableh ayay labada kooxood laagteen rekoodhayaal tiro badan, waxaana tuurashada rekoodhayaasha ku horaysay kooxda Napoli iyada oo uu u tuuray Jorginho kaas oo uu ka badbaadiyay goolhaye Buffon, laakiin rekoodhayaal badan kadib ayuu ugu danbayn goolhayaha Napoli ee Rafael noqday halyayga kulankan ee Napoli guusha ay koobka ku qaaday u horseeday kadib markii uu ka badbaadiyay Simone Podoin rekoodhaha guushu kooxdiisa ku raacday, Rafa Benitez iyo kooxdiisa ayaana iska jaray koobka ay sida adag ugu dagaalameen. Waa markii labaad ee ay kooxda Napoli ku guulaysato koobka Super Cupka Itlay, waxayna marka horena ka qaaday isla kooxda Juventus.